Ọrịa gastronomy nke Mexico | Akụkọ Njem
Foto | Schoollọ akwụkwọ nke ndị njikwa ọdịbendị na ndị na-eme egwuregwu
N'ihe banyere nri, ndị Mexico nwere okwu na-ekwu "afọ zuru ezu, obi obi ụtọ." Ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na anyị eri nri na ụlọ oriri na ọ luxụ luxụ mara mma, na taco kwụ n'akụkụ ma ọ bụ n'ụlọ enyi, n'agbanyeghị ebe ọ sọrọ ya bụrụ, ndị Mexico maara otu esi eri ezigbo nri ọdịnala. N'ezie, ọ dị ụtọ nke ukwuu ma nwee ekele gburugburu ụwa na na Nọvemba afọ 2010, UNESCO ghọtara ya dị ka ihe nketa nke mmadụ. Kedu ihe na-eme ka gastronomy Mexico dị iche iche? Ọfọn, nke ahụ pụrụ iche na-emetụ aka na efere. "Onye oseose" ma ọ bụ "oseose" nke ndị Mexico ga-asị.
Ọzọ, anyị ga-enyocha gastronomy kacha mma nke Mexico ma anyị abanye n'ime kichin ya.
1 Ebe nri Mexico
2 Njirimara nke nri Mexico
3 Chili, agwa na ọka
4 Ahụkarị efere nke Mexico
4.4 Mmiri achicha
4.7 Ahụekere peekere
5 Ahụkarị ọ drinksụ ofụ nke Mexico
5.3 Mmiri ọhụrụ
Ebe nri Mexico
Ọ bụ otu n'ime ndị ochie kemgbe mmalite ya malitere afọ 10.000, n'oge ọka malitere ịkọlite ​​ka ọ bụrụ ebe nri nke ndị Mesoamerican. Themụ amaala bi n'ókèala ahụ nwere akwụkwọ nri, chili na ọka dị ka isi nri ha, agbanyeghị na nri ndị a sonyeere ndị ọzọ na-adịchaghị mkpa dịka tomato, ube oyibo, cactus, ugu, koko ma ọ bụ vanilla.
N'oge nchọpụta America, agbakwunyere ihe ọhụrụ na nri ndị Mexico dị ka karọt, akwụkwọ nri, osikapa, ọka wit, ọka oat, peas ma ọ bụ ụdị anụ dị iche iche sitere na anụmanụ sitere na Europe dịka anụ ezi.
Njikọ ahụ mere ka otu n'ime gastronomị bara ọgaranya n'ụwa nke gbasaa mmetụta ya n'ọtụtụ akụkụ ụwa. Taa ọbụna nri ndị Mexico bụ ihe kpatara njem ndị njem site na njem nlegharị gastronomic. Ọtụtụ ndị njem na-aga Mexico iji mara ezigbo pozole, cochinita pibil, mole poblano, enchiladas, chile juru, nwa ewu ma ọ bụ achịcha dogfish.
Njirimara nke nri Mexico
Dishesdị efere dị iche iche bụ otu n’ime njiri mara nri Mexico. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ steeti ọ bụla nwere ọdịnala na ntụziaka nke gastronomic nke ya, mana ihe jikọrọ ya bụ agwa, ọka, chili, na tomato.
Ihe ọzọ e ji mara gastronomy nke Mexico bụ na ha anaghị eme ọdịiche dị n'etiti nri kwa ụbọchị na nri anụ ọkụ.
Enwere nri oriri na ọ fụ suchụ dị ka tamales, mole ma ọ bụ tacos nke a ga-eri n'oge ọ bụla n'afọ.
Nri Mexico bụ nsonaazụ ọdịbendị na n'ime ya ị nwere ike ịmasị ọhụụ ndị Mexico nwere banyere ụwa.
Chili, agwa na ọka
Chili ose bụ akụkụ nke nri ndị Mexico kwa ụbọchị, na-eme ka ọ bụrụ njem dị egwu nke ndị ala ọzọ, n’ihi na ọ na-eju ha anya site na ịba ụba dị iche iche na ụdị dị iche iche nke ihe a na-enye efere.
Banyere agwa, site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ, ejirila ha mee ihe icho mma n'oge nri ọ bụla. Mana onye kachasị anụ ọhịa nke Mexico bụ, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ọka na nsụgharị ya dị iche iche: enchiladas, chilaquiles, tacos ... ma nri a enweghị ihe ọ bụla ga-abụ otu na nri Mexico.
Ahụkarị efere nke Mexico
ezigbo anụ mmịkpọ Mexico, carnitas na tacos ọkụkọ
Ọ bụ nri kachasị nnọchi anya nke gastronomy nke Mexico. O sitere na tortilla oka nke awukwasiri ihe di iche iche dika anumanu, nri, ihe ndi ozo, wdg. A na-eje ozi ha ugboro ugboro na mbadamba mbadamba na nkwadebe ha ga-adabere na mpaghara mba ahụ.
Nke a bụ efere dị ụtọ sitere na achịcha tortilla ejiri chili ihendori wee jikọta yabasị, cheese, chorizo ​​ma ọ bụ ọkụkọ, na ndị ọzọ. Chilaquiles bụ nri ụtụtụ nke ọtụtụ ndị Mexico.
O bu udiri ofe esiri na oka oka tinye n’ime ya ka nke tinyere ezi ma obu okuko. Ihe ndị pozole nwere ga-adabere nke ukwuu na mpaghara ebe esiri ya ma ọ nwere ike ịgụnye letus, yabasị, kabeeji, cheese, ube oyibo, chili, oregano, wdg. A na-eri nri a na nnukwu efere.
Nke a bụ ụdị nri Jalisco a na-ahụkarị ma were ya dịka aka dị nsọ iji lụsoo hangovers. Ntọala nke achicha mmiri riri bụ birote (crusty, gold na achịcha achicha) nke jupụtara na anụ ma gbasaa na ihendori chili dị ọkụ. A na-agbakwunye Tomato ihendori, galik, cumin, yabasị ma ọ bụ mmanya.
Site na convens nke ụlọ ọrụ na-anọchite anya Zamora (Hidalgo, Michoacán), chongos bụ ihe eji megharịa ọnụ dị ụtọ ma na-atọ ụtọ nke ejiri sinamọn, mmiri ara ehi curd na shuga mee.
N'oge a, ihe eji megharịa ọnụ nke Mexico a bụ akụkụ nke nri ụmụ amaala obodo ma jiri ya mee ihe eji megharịa ọnụ yana maka ịzụrụ ahịa. Emere ya na nkpuru amaranth, mịrị na mmanụ a honeyụ.
Ha bụkwa ụdị nri Mexico nke ukwuu ma jiri shuga, ahụekere bekee, mmiri, majarin na mmanụ ihe oriri kwadebe ya.
Ahụkarị ọ drinksụ ofụ nke Mexico
Tequila, ihe ọ drinkụ drinkụ na-aba n'anya na Mexico
Otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke ọdịbendị Mexico bụ gastronomy ya na n'ime ụwa ahụ nke textures, agba na ụtọ, ihe ọ drinksụ itsụ ya na-atọ ụtọ. Enwere ndị aholicụrụma, ndị na-atọ ụtọ, ndị na-enye ume ọhụrụ, oseose na enweghị mmanya na-aba n'anya. N'ikpeazụ, ụdị dị iche iche dị ukwuu dị ka mba n'onwe ya.
Ọ bụ ihe ọ drinkụ drinkụ a ma ama n'ụwa niile na Mexico ma bụrụ otu n'ime ndị nnọchi anya ukwu nke ọdịbendị Mexico.
A malitere imepụta ya n'etiti narị afọ nke iri na asaa na usoro mmepụta ya dị oke egwu dị ka ekpomeekpo ya. A na-enweta Tequila site na gbaa ụka na yist na distillation nke na-acha anụnụ anụnụ agave juices, nke na-emesị tinye na gbọmgbọm osisi.
Ugbu a enwere ihe dịka ụdị 160 na ugbo iri na abụọ na-emepụta ya, na-enye ndụ otu n'ime ngwaahịa ndị Mexico kachasị achọ na mba ofesi. Nke nwere ugwu akwukwo amara aha ha. Na mgbakwunye, ekwuputara uzo agave nke Jalisco bụ World Heritage Site ma na ekele a, a kwalitere ụzọ Tequila site na mpaghara dị iche iche na-emepụta ya., nke nwere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na akụkọ ihe mere eme nke ihe ọ thisụ thisụ a, mmalite ya na mmepụta ya.
Michelada bụ ụzọ dị ezigbo mma na Mexico iji nwee ọ beerụ biya biya oyi na-atụ na nnu, tabasco, lemon na ihe ndị ọzọ na-atọ ụtọ. Na Latin America, michelada bụ ihe ọ drinkụ drinkụ na-ewu ewu ma na-ejikarị biya biya biya.
Via | Mkpụrụ akwụkwọ nri Culinary
Ọnọdụ ihu igwe na-ekpo ọkụ n'akụkụ ụfọdụ nke mba ahụ emeela ka mmiri dị ọcha bụrụ ihe ọ popularụ nonụ na-adịghị egbu egbu. Emere ha site na nkpuru osisi na shuga ka ha na ato uto. Ndị a ma ama bụ ndị a kwadebere site na chia, hibiscus, tamarind na horchata.
Ọ bụ ezie na chia bụ mkpụrụ ala, mkpụrụ osisi ndị ọzọ na-esite n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa dịka Africa, India na Spain. Agbanyeghị, ụzọ iji kwadebe ma jee ozi maka mmiri ọhụrụ a (na nnukwu iko iko) bụ ihe a na-ahụkarị na ọdịnala na Mexico.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Gastronomy » Ọkpụkpụ gastronomy nke Mexico